Nuxurka Shirkii dhexmaray Shanta Madaxweyne goboleedka ee dalka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Nuxurka Shirkii dhexmaray Shanta Madaxweyne goboleedka ee dalka
Shanta Madaxweyne goboleedka dalka / Sawir hore /Keydka HalQaran News
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynayaasha maamul goboleedyadda ayaa xalay yeeshay kulan dhanka teleefanka kadib dadaallo ay waday maalmihii lasoo dhaafay beesha Caalamka oo ku aadana khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxda Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle iyadoo diirada lagu saaray sidii dalka ay uga dhici laheyd doorsho lagu wada qanacsan yahay.
Qodobbada kulanka looga hadlay waxaa ka mid ah Xaaladda Gobolka Gedo iyo muranka ka taagan Guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay.
Wararka ayaa sheegaya, in Madaxda ay ku heshiiyeen in la xaliyo khilaafka ka taagan doorashada waxaana ay ku balameen kulan deg deg ah.
Shanta Madaxweyne goboleedka